माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धकाे रिटमा सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासमा परेको छ ।
नेपाल र भट्टराईविरूद्ध बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानुनका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको सन्दर्भमा बोलेको छैन । न्यौपानेले भने सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दावी रिटमा गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यमाथि मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । न्यौपाने २५ वर्षअघि पनि यस्तै रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । त्यसबेला सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको छानविनको दायरामा नआउने फैसला गरेको थियो ।
<<< : कसरी भयो भ्यालेन्टाइन डे’को सुरुवात ?
राष्ट्रियसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधन : >>>